Tag: atiny b2b | Martech Zone
Tag: atiny b2b
Lisitry ny atiny tsy maintsy ananana REHETRA B2B REHETRA Mba hamahana ny dian'ny mpividy
Zoma, Aprily 23, 2021 Friday, May 7, 2021 Douglas Karr
Mahagaga ahy fa ny B2B Marketers dia matetika hametraka fampielezan-kevitra marobe ary hamoaka onjam-peony na fanavaozana haino aman-jery sosialy tsy misy trano famakiam-boky votoaty faran'izay kely indrindra, izay tadiavin'ny vinavina rehetra rehefa manao fikarohana momba ny mpiara-miasa, vokatra, mpamatsy vola manaraka izy ireo. , na fanompoana. Ny fototry ny atiny dia tokony hanome sakafo mivantana ny dian'ny mpividy. Raha tsy… ary manao izany ny mpifaninana aminao… dia tsy ho azonao atao ny manangana orinasanao
Manova toe-tsaina amin'ny varotra atiny B2B (miaraka amin'ny statistika)
Talata, Aogositra 25, 2015 Talata, Aogositra 25, 2015 Douglas Karr
Ny Group Economist dia nanao fanadihadiana lalina sy famakafakana ny toetran'ny B2B ary namokatra ity sary ity tamin'ny valiny. Isaky ny fanontaniana dia misy ny fampitahana ny veteran'orinasa amin'ny mpividy orinasa manaraka. Mahaliana ny mahita ny banga lehibe misy eo amin'izy roa. Amin'ny famerenana ny banga, misy fahasamihafana mahavariana sasany izay mahita ireo tatitra momba ny fikarohana mahasoa kokoa amin'ny 35% be izao ny tatitra fikarohana! Ny veteran'orinasa, amin'ny 26%, dia mandany efatra farafahakeliny
Tuesday, August 25, 2015 Tuesday, August 25, 2015
Paikady marketing amin'ny B2B ho an'ny 2013 sy Beyond
Alahady, Aogositra 11, 2013 Asabotsy, Aogositra 10, 2013 Douglas Karr
Rehefa miresaka amin'ireo orinasa manompo ny mpanjifa izahay dia manontany foana izy ireo raha niara-niasa tamin'ny orinasa B2C izahay. Rehefa miresaka amin'ireo orinasa B2B izahay dia manontany izy ireo raha niara-niasa tamin'ny orinasa B2B izahay. Raha ny marina rehetra dia mitovy ny paikady… isa izy ireo ary samy hafa ny fizotry ny fividianana. Na izany aza, mahita fahasamihafana amin'ny tombony azo isaky ny fividianana izahay. Ny orinasan'ny B2C dia mirona amin'ny làlan'ny volavola avo lenta sy fidiram-bola ambany isaky ny fividianana
Sunday, August 11, 2013 Saturday, August 10, 2013
5 lakilen'ny fitorahana bilaogy B2B
Sabotsy, Janoary 2, 2010 Sabotsy, Oktobra 25, 2014 Douglas Karr
Amin'ity herinandro ity aho dia miasa amin'ny famelabelarana ho an'ny kaonferansa Webtrends Engage. Tena voafaritra tsara ny lohahevitro ary fohy ny fotoana anaovana (10 minitra), ka sarotra amiko ny hanao fampisehoana iray heck! Nangatahana aho hiresaka amin'ny bilaogy B2B nahomby. Nataoko tery ny lakilen'ny Business to Business Blogging hatrany amin'ny paikady 5 miavaka ho an'ny famelabelarana: Ho eo aloha. Tsy ampy ny mitoraka bilaogy, tsy maintsy miditra ianao
Saturday, January 2, 2010 Saturday, October 25, 2014